Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho. – Soomaali 24 Media Network
Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho.
Shirkan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee nuuciisa ah oo lagu qabto Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb gelaya wakiilo ka socda qaar ka mid ah dawladaha islaamka culumaa’udiin ka kala yimid caalamka Islaamka iyo xubno matalaya culumada soomaaliyeed.
Shirka oo looga hadlayo badqabka fikirka iyo la dagaallanka xag-jirnimada ayaa looga gol leeyahay sidii la iskaga kaashan lahaa la dagaallanka fikirka xag-jirka ah oo dhibaato ba’an ku haya qaybo badan oo ka tirsan dunida islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Raysal wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu furo shirka isla markaana uu qodbad ka jeediyo is uu u muujiyo aragtida Dawlada Federaalka Soomaaliya ee ku aadan la dagaallankaxag-jirnimada.
Dadka shirka ka qay gelaya ayaa lagu sheegay 12 wakiil dawladeed, 30 culumo heer caalami ah iyo 12 ka tirsan culumada Soomaaliyeed.
Gebangebada shirka ayaa la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed salka ku haya go’aanada ka soo baxa shirka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo kuwa fikirka xag-jirka ah ee ragaadiyey dunida muslimka.
Previous Hey’adaha amniga Soomaaliya oo baaritaano xoog leh ka wada xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
Next Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya oo cadaadis lagu saarayo inay ka qayb galaan shirka Garoowe.